Yintoni uSamadhi eBuddhism?
Ubungqina Bodwa Bengqondo
U-Samadhi ligama lesiSanskrit ungabona ezininzi kwiincwadi zobuBuddha, kodwa akusoloko zichazwe. Ukongeza, unokufumana iimfundiso ezahlukahlukeneyo malunga ne-samadhi kwizithethe ezininzi zase-Asia, kubandakanya amaHindu, iSikhhism, kunye neYainism, kunye nobuBuddha, obungabangela ukudideka. Yintoni i-samadhi eBuddhism?
Iingcambu ze- samadhi , sam-a-dha, zithetha "ukuqokelela ndawonye." Ngamanye amaxesha uSamadhi uguqulelwe ngokuthi "ingcamango," kodwa yinkxalabo ethile.
"Ukubonakaliswa kwengqondo engatshatanga," okanye ukugxila ingqondo ngesisombululo esisodwa okanye into engacinga ngayo ukuya kwinqanaba lokubamba.
Emva kokugqibela kukaJohn Daido Loori Roshi, utitshala waseSoto Zen, wathi, "U-Samadhi ngumntu owaziyo ukuvuka, ukuphupha, okanye ukulala ebuthongweni.
Kwi-samadhi ejulile, ukuxhamla kuphelele kangangokuthi yonke into yokuba "i-self" iyanyamalala, kwaye isifundo kunye nento iyaxhamla. Nangona kunjalo, kukho iintlobo ezininzi kunye namanqanaba e-samadhi.
U-Samadhi unxulumene nama- dhyanas (iSanskrit) okanye i- jhanas (i-Pali), ngokuqhelekileyo iguqulelwe ngokuthi "ukucamngca" okanye "ukucamngca." Kwi-Samadhanga Sutta ye- Pali Tipitika (i-Anguttara Nikaya 5.28), uBuddha wembali wachaza amanqanaba amane ayisiseko e-dhyana.
Kwi-dhyana yokuqala, "ingcamango ecacileyo" ihlakulela ukuhlwithwa okukhulu okuzalisa umntu ekucamngeni.
Xa iingcamango zinyanzeliswa ngumntu ungena kwi-dhyana yesibini, azaliswe ngokuhlwithwa. Ukuhlwithwa kudlulayo kwi-dhyana yesithathu kwaye kuthathelwa indawo enelisekile, ukuzola, kunye nokuqapha. Kwesine ye-dhyana, konke okuseleyo kuhlambulukile, ukuqonda okuqaqambileyo.
Ngokukodwa kwi- Theravada Buddhism , igama elithi samadhi linxulumene ne-dhyanas kunye neendlela zokuxininisa ezenza i-dhyanas.
Qaphela ukuba kwiincwadi zobuBuddha unokufumana iingxelo zamanqanaba amaninzi okucamngca kunye nokugxininisa, kwaye amava akho okucamngca angayilandela inkambo eyahlukileyo evela kwi-dhyana emine. Kwaye kulungile.
I-Samadhi idibaniswe neNgxenyana yokuLungisa kwiNqanaba leNdlu yesisibhozo kunye ne- dhyana parameter , ukugqibelela kokucamngca. Lo ngowesihlanu kwiMahayana Six Perfections.
Ngaphezulu kweenkulungwane, iinkosi zamaBuddhist meditation ziye zatshintsha amanqanaba amaninzi afihlakeleyo samadhi. Abanye ootitshala bachaza i-samadhi kwiindawo ezintathu ze-cosmology yamaBuddha yasendulo: umnqweno, ifomu, kwaye akukho fomu.
Ngokomzekelo, ukuxhamla ngokupheleleyo ekuphumeleleni umdlalo ngu-samadhi kwindawo yomnqweno . Abadlali abaqeqeshwe kakuhle banokungena kwiinkcaso kangangokuthi bayalibala "mna," kwaye akukho nto ikhona ngaphandle komdlalo. Olu hlobo lwesimadhi samadhi, kungekhona ngokomoya.
U-Samadhi kwindawo yohlobo lugxininiso oluqinileyo kumzuzu wamanje, ngaphandle kokuphazamiseka okanye uqhotyoshelweyo, kodwa ngokuziqhelanisa ngokwakho. Xa i "I" iyanyamalala, nguSamadhi kwindawo engekho . Abanye ootitshala bahlula amanqanaba kumanqanaba angaphantsi.
Unokuba ubuza, "ke, kuthini na?" UDaido Roshi wathi,
"Ngokusemthethweni uSamadhi, ekugqibeleni ulahlekile umzimba kunye nengqondo, akukho nto ichaza kwaye akukho nto ikhunjulwayo. Ngengqiqo, akukho 'amava' kuba kukho ukuhlanganiswa ngokupheleleyo kwesihloko kunye nento, okanye ukuqonda ngokupheleleyo ukungabikho ukwahlukana. Akukho ndlela yokuchaza into eyenzekayo okanye eyenzekayo. "
Ukhokelo lutitshala lukhuthazwa kakhulu. Iindlela zokucamngca zeBuddhist zivula umnyango kumava amaninzi, kodwa akubona onke awo mava akwazi ngokomoya.
Kuqheleke kakhulu ukuba izazi zodwa zikholelwe ukuba zifikelele kwiimeko ezinzulu ezicamngcayo xa eqinisweni ziye zatshitshisa phezulu. Bangavakalelwa ukuvuthwa kwe-dhyana yokuqala, umzekelo, kwaye bacinge ukuba ukhanyiswa. Utitshala olungileyo uya kukukhokela indlela yokucamngca kwaye akugcine ekukhonzeni naphi na.
Izikolo ezahlukeneyo zoBuddha zicamngca ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye ubuncinane izithethe ezimbini ezihleliyo ukucamngca sele zatshintshwa ngokugxilwa. I-Samadhi idla ngokufihlakeleyo ngokwenza okucacileyo, ukucamngca, nangona kunjalo, iqhutywe rhoqo kwixesha elide. Ungalindeli ukuba u-samadhi ucamngce okokuqala.
Samadhi kunye nokukhanyisa
Uninzi lwamaBuddhist amasiko aluthetha ukuba samadhi yinto efanayo nokukhanyiselwa. Kufana nokuvula umnyango wokukhanyisa. Abanye ootitshala abakholelwa ukuba kuyimfuneko, ngokwenene.
Emva kweShunnu Suzuki Roshi, umsunguli weSan Francisco Zen Centre, walumkisa abafundi bakhe ukuba bangaqulunqwa kwi-samadhi. Ngesinye isikhathi wathi enkulumweni, "Ukuba uyenzela i-zazen , uyazi, ufumana i- samadhi eyahlukeneyo, leyo yinto enjani yokubona indawo, uyazi."
Kungathiwa ukuthi samadhi ukhulula umxholo weqiniso; lisibonisa ukuba ihlabathi esiyiqonda ngokuqhelekileyo "alikho" njengokuba siyicinga. Ikhupha ingqondo kwaye icacise iinkqubo zengqondo. Uthisha waseTheravadin u-Ajahn Chah wathi, "Xa i-samadhi ilungile, ubulumko bunalo ithuba lokuphakama ngamaxesha onke."
I-Dokusan: Udliwano-ndlebe lwangasese kunye noMfundisi weZen
Iindlela ezili-7 zokwenza abahlobo kwiKholeji
Iinjongo zokuThuthukiswa koMhlaba zilinganiselwa njani usebenzisa i-Seismic Scales
Iimpawu eziphakamayo: iLibra Ukuphakama
I-Down Syndrome Iinkcukacha - Amandla kunye neemfuno
Indlela Yokuthengisa Iqoqo Yakho Yomdlalo Wamahlaya
Soneros: I-Best Salsa Singers
Inokuthenjwa kwaye ixhamle